🥇 ▷ Teknolojiyadaha wax ka beddeli doona warshadaha baabuurta sannadka 2020 ✅
Teknolojiyadaha wax ka beddeli doona warshadaha baabuurta sannadka 2020
Automation, digitization iyo moodooyinka ganacsi ee cusub ayaa isbeddelay qaybo badan, kuwaas oo shaki la’aan ah warshadaha baabuurta. Xaqiiqdii, marka loo eego baaritaannada kala duwan *, Shirkadaha 76% waxay maalgashi ku sameynayaan tikniyoolajiyadda waaxda baabuurta.
Dheeraad ah, 15% dhammaan macaamilyada macaamiisha macaamiisha waxaa wax ka qaban doona oo keliya Sirdoonka Farshaxanka 2021 *, oo ka dhigan koror 400% marka la barbar dhigo 2017.
Ifafaaladan ayaa bixinaya isbeddellada carqaladeeya ee ay wadaan teknolojiyadda waaxda mootooyinka. Waana in baahiyaha iyo rajooyinka macaamiisha maanta ay caqabad ku yihiin soosaarayaasha isla markaana baahida joogtada ah ee waayo-aragnimada qotodheer leh ay u horseedayso inay ku daraan dalab tikniyoolaji ah oo weyn oo lagu soo saaray waxsoosaarkooda. Dhinaceeda Clicars Wuxuu falanqeeyay afar teknolojiyad cusub oo aan shaki ku jirin inay si adag ugu dhici doonaan sannadka 2020.
Dhiirrigelinta iyo koronto si loo yareeyo uumi-baxa C02 iskana ilaali xaddidaadaha wareegga
Dhawaan galida sharciga waajibaadka sharci ee lagu soo rogay soo saareyaasha Si loo gaaro in celceliska qiiqa CO ee qiiqa gawaarida lagu iibiyo Yurub 2021 uu yahay 95g / CO2 (sanadka 2019 celcelis ahaan wuxuu ahaa Spain celcelis ahaan 121g / CO2), waxay keenaysaa in qaybta ay isu rogto – kiisas badan-dhinaca. xoojinta iyo korantada gawaarida.
“Haddii aan ku darno waajibka sharci ee saaran soo-saareyaasha walaac ku saabsan bay’adda bulshada dhexdeeda ku nool, waxaan hubnaa inay jiri doonaan koror xoog badan oo moodooyinka isku-dhafka ah iyo kuwa korantada ah, maadaama gawaarida noocaan ah ay muhiim u noqon doonaan Ka fogow ganaaxyada ay soo saareyaashu tixgeliyaan in aan la isticmaali karin“ waxay sheegaysaa Carlos Rivera, iskaashatada Clicars.
Hal-abuurnimada ugu xiisaha badan ee la xidhiidha qaybta baabuurta ayaa lagu soo bandhigay carwadii CES 2020 ee dhowaan la qabtay, iyada oo laga bilaabayo fikradaha koronto ee cusub, sida bay’ada iyo ballanqaadka waarta ee Fisker Ocean Electric SUV (roogagga laga sameeyay dhalooyinka dib loo warshadeeyey iyo shabagyada kalluumeysiga, faahfaahinta dashboard-ka oo ay la socdaan maaliyado dib loo warshadeeyay iyo daaqada dambe ee daaqada biyaha lagu ridayo oo leh taayirrada dib loo rogay), ama fikradda cusub ee Mercedes, gaariga korontada. Wuxuu ilaaliyaa Himilada AVTR, iyada oo hawlaheeda lagu xakameynayo macluumaadka ku saleysan gacanta. Adoo eegaya mustaqbal, waxay ku bilaabataa garashada garaaca wadnaha iyo neefsashada dareewalka.
Tiknoolajiyadda isha ee isha ku haysa hagaajinta amniga
Codsiga tooska ah ee tikniyoolajiyadda indhaha ayaa ku jira Nidaamyada korjoogteynta darawalka (DMS). Iyada oo la doonayo in la sameeyo gawaarida badbaadada iyo kuwa horumarsan, isku darka aqoonsiga wajiga iyo raadinta isha ayaa oggol ka hel macluumaad ku saabsan feejignaanta darawalka, feejignaanta ama u fiirsashada gadaal gaariga. Intaa waxaa sii dheer, tikniyoolajiyadda isha ee isha ku haysa ayaa si weyn waxtar ugu leh hannaanka baaritaanka iyo kormeerka amniga, maadaama ay iftiin ka bixinayso aragtida darawalka. Xitaa nidaamyo isku dhafan ayaa laga fulinayaa halkee wuxuu isku daraa jawiga dhabta ah iyo xaqiiqada dhabta ah, iyo tikniyoolajiyadda indhaha lagu fiirsado Waxyaabaha sababa jeedinta ama feejignaanta inta wadista la wado ayaa la aqoonsaday.
Soosaarayaasha softiweerka sida Isbaanishka Irisbond ama soo saareyaasha sida Mercedes-Benz, Ford, Volvo iyo Volkswagen, waxay horeyba u bixiyeen teknoolojiyad la mid ah, si kastaba ha ahaatee, Toyota waxay hogaamineysaa qaybta tikniyoolajiyadeeda indhaha ee lagu hirgaliyay astaanteeda ‘Premium Lexus’.
Horumarka tikniyoolajiyada sanadihii la soo dhaafay ayaa ka dhigtay ka hadalka gawaarida iskiis u madax banaan ee maaha shey khayaali ah. Waxaa jira gawaari badan oo aad u fara badan oo wata teknolojiyadda iswada ee madaxbannaan oo leh aalado sida Kontroolada La-qabsiga La-qabsiga, Kaamerooyinka 360º, dareemayaasha Ultrasonic, ama Radars kuwa kale, kuwaas oo si tartiib tartiib ah loogu dhex daray gawaarida. “Waxaa jira 5 heerar oo iskii ah, 3-aad ayaa ah kuwa ugu horumarsan xilligan ee gawaarida taxanaha ah. Sanadkii 2017-kii Audi A8 wuxuu noqday heerka 3-aad ee baabuurta la isku qurxiyo. Sidoo kale heerarka 3aad oo ay ugu mahadsan tahay tikniyoolajiyadeeda ‘Autopilot’, Tesla Model 3 ayaa noqotay bilo aad u yar ka dib markii la bilaabay suuqa ugu wanaagsan ee ‘Saloon’ ee suuqyada ka horreeya sida “BMW 3 Series, Audi A4 ama Mercedes C-Class”, Rivera ayaa tilmaamtay.
Shirkado badan ayaa ku qaldaya gawaarida otomatiga ah, sida ay awoodday Waxay soo afjaraan khaladaadka bini aadamka badankood ee keena shilalka, yareynta ciriiriga taraafikada oo aad u fududeyso safarka. Sida uu qabo baarlamaanka Yurub, laga bilaabo 2030, waxaad bilaabi kartaa inaad ogaato wadista dhabta ah ee gawaarida heerka 5, oo leh qirasho buuxda oo ah ‘, kaas oo baabuurta aan lahayn isteerinka ama wadooyinka gawaarida lagu ciyaaro. In kasta oo, maanta, ay weli jiraan arrimo ay tahay in la caddeeyo oo ku saabsan sharciga baabuurka noocan ah marka loo eego nabadgelyada waddooyinka, mas’uuliyadda dhacdada shil, anshax, ama xog-ururinta, iyo arrimo kale.
Gawaarida iskuxiran ee maaraynta waxqabadka iyo MirrorLink
Thanks to horumarka teknolojiyada, qalab cusub ayaa la sameeyay kaas oo u adeegaya sidii loo wanaajin lahaa u adeegsiga gaari, u hello raaxo weyn ama xitaa siin kara madadaalo weyn. Dhinacyadu waa dhinacyadii soo jireenka ahaa sida quwadda matoorka, nashqadeynta ama waxqabadka, maanta gaari smart ah ayaa loo baahan yahay.
Hawlaha ay ka codsadeen isticmaaleyaashu inay ka kaxeeyaan taleefannadooda gacanta ayaa sii kordhaya: furitaanka ama xiritaanka gaadhiga, hubinta xaaladda giraangiraha, awood u lahaanshaha in lagu ogaado tuugada waqtiga, bilaabida gaadhiga si ay u dhaqaajiso kuleylka… ama ogaanshaha haddii carruurta da ‘yarta ay yihiin. qaatay gaadhiga oo dhaaftay xadka xawaaraha “Rivera ayaa tilmaamtay.
Sanadkan, iyo sida ku saleysan qiyaasta suuqa *, ku dhawaad ​​100% gawaarida cusub ee Yurub waxay noqon doonaan gaari ku xiran, madadaalada dijitaalka, isgaarsiinta iyo adeegyada duulista. Marka la gaaro 2030, waxaa lagu qiyaasaa in ku dhawaad ​​70% gawaarida wadista Yurub ku xirnaan doona.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira MirrorLink, oo bilaabay inuu qaado talaabooyinkiisii ​​ugu horreeyay 2011, waa mid ka mid ah heerarka u oggolaanaya ka xakamee mobiladaha korantada gaariga. Waxay la jaanqaadi kartaa in kabadan 1,400 moodello casri ah, waxqabadka ugu weyn ee loo yaqaan ‘MirrorLink’ oo laba laabmaya waxa lagu arkaa shaashadda casriga ah ee shaashadda ama nidaamka maqalka codka ee dashboard-ka gaariga. In sidan, waad u adeegsan kartaa dhamaan barnaamijyada aad ku haysato mobiilkaaga gaariga dhexdiisa, sida Spotify, Waze ama Khariidadaha Google, Dhamaan waa la ogolaaday lagana tixgalinayaa inay aamin yihiin marka la isticmaalayo adoo wadida wadisteeda si aysan qatar ugu gelin darawalnimada.